TEC ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများနှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial Laser Diode Module - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > Coaxial pigtailed လေဆာ diodes > TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial လေဆာ Diode module
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial လေဆာ Diode module
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial Laser Diode Module ယေဘုယျအားဖြင့်အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုတည်ငြိမ်စေရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုလေဆာအရင်းအမြစ်စမ်းသပ်ယန္တရားများနှင့် OTDR ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Laser diode သည် CWDM-DFB ချစ်ပ်၊ built-in isolator၊ built-in monitor photodiode နှင့် TEC cooler နှင့် SC / APC, SC / PC, FC / APC, FC / PC optical fiber connector တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ optical fiber နှင့် pin definition တို့၏အရှည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ output output ကို 1MW, 1270nm ~ 1610nm CWDM လှိုင်းအလျားကနေရရှိနိုင်ပါသည်။
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial Laser Diode Module ၏ 1. အနှစ်ချုပ်
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial လေဆာ Diode Module ၏နိဒါန်း
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial လေဆာ Diode Module ၏ 3. အင်္ဂါရပ်များ
> 2mW output စွမ်းအင်၊
ဖြန့်ဝေသောတုံ့ပြန်ချက် (DFB) လေဆာဒီဇိုင်း;
လှိုင်းအလျား / အပူချိန်ကိန်း 0.1nm / ƒ;
ရွေးချယ်နိုင်သော FC / PC သို့မဟုတ် FC / APC connector ။
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial လေဆာ Diode Module ၏လျှောက်လွှာ
CDMA / GSM ဂီယာစနစ်၊
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial လေဆာ Diode module ၏ 5. Electro-Optical ဝိသေသလက္ခဏာများ (T = 25â "ƒ)
အလယ်လှိုင်းအလျား အိုင်စီ CW, PO = PF 1407 1410 1413 nm
optical output ကိုပါဝါ PF CW, = 30mA လျှင်2- - mW
လက်ရှိ Threshold အိုင်တီ CW - 8 15 mA
CW, T က = 85â " - - 50
operating ဗို့အား VF - - 1.2 1.5 V
ထချိန် / ကျဆုံးခြင်းအချိန် (၂၀-၈၀%) TR / TF IF = ITH, PO = PF, 50Ohm - - 0.2 ns
လက်ရှိစောင့်ကြည့် ငါက CW, PO = PF 0.1 - 1 mA
စွမ်းရည် C - - 10 15 PF
ရောင်စဉ်တန်းအကျယ် (-20dB) Î” Î» CW, = 30mA လျှင် - 0.32 - nm
ဆင်ခြေလျှောထိရောက်မှု SE CW, = 30mA လျှင် 0.1 - - W / A
အမှားခြေရာခံခြင်း TE im = စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်လျှင် Ith + 20mA -1.5 - 1.5 dB
optical အထီးကျန်မှုတွေ ISO - 30 - - dB
ဘေးထွက် mode ကိုဖိနှိပ်မှုအချိုးအစား SMSR CW, = Ith + 20mA လျှင် 30 40 - dB
ma - - - 0.9 A
Î” T 40 - - K
Thermistor ခုခံ rth - - 10 - kÎ©
နှိုင်းယှဉ်ပြင်းထန်မှုဆူညံသံ Rin - - - -145 dB / Hz
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial Laser Diode Module ၏ ၆။ အထုပ်ဆွဲ & PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ)
TEC နှင့်အတူ 1410nm Pigtailed Coaxial Laser Diode Module ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
၀ ယ်သူသည်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။
A: ကျနော်တို့မှာ 1270 ~ 1610nm လေဆာ diode ရှိတယ်။
hot Tags:: 1410nm TEC, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်နှင့်အတူ Pigtailed Coaxial Laser Diode Module, တရုတ်မှာလုပ်ထားတဲ့စျေး၊
Pigtail နှင့်အတူ 1290nm Coaxial DFB လေဆာ diode
1330nm 2mW 4mW Coaxial DFB Pigtail လေဆာရောင်ခြည်